Ihe omuma: 6 Uru nke ntanetị weebụ maka azụmahịa
Nchịkọta weebụ bụ usoro nke na-enye anyị ohere wepụ data site na weebụsaịtị dị iche iche na ngwa ngwa na oru oma. Nke a bara uru maka mmalite, ndị ahịa, ndị ọkachamara mgbasa ozi mgbasa ozi, ndị na-eme nnyocha n'ịntanetị, ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị mmemme, ndị mmepe, na ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri. Nchịkọta weebụ na-eme ka ndozi data dị mma n'ime obere oge.
A na-akọwa uru ndị dị na nchịkọta weebụ n'okpuru - how to make bike stickers.
1. Ego ole
O doro anya na nchịkọta weebụ bụ ụzọ dị oke ọnụ iji nweta data a pụrụ ịgbanwe. A na-enweta ọtụtụ ọnụọgụ ọrụ na Ịntanetị, tinyere mbubata. Ee, nke na-eme ka ọ dịrị gị mfe wepụ data sitere na ibe weebụ achọrọ n'efu na-efu. N'ihi ya, nchịkọta bụ ihe kachasị mma maka mmalite na ụmụ akwụkwọ ndị na-adịghị achọ itinye ego ọzọ na ndị na-ewepụta data.
2. Mfe ime ihe na imekota
Ozugbo ị họrọla nchịkọta data kachasị amasị gị ma ọ bụ nchịkọta weebụ, ị nwere ike ịmalite azụmahịa gị ma nwee ike ị nweta nnukwu ego. Nke a bụ n'ihi na ọrụ ntanetị weebụ na ngwa dị mfe ịrụ ọrụ ma nwee ike imejupụta ya na ihe nchọgharị weebụ na sistemụ arụmọrụ. Ha nwere ike iṅomi ma wepụ ma ọ bụ peeji ole na ole nke blog gị ma ọ bụ saịtị ahụ na-enweghị ihe ọ bụla.
3. Ekwesiri idozi ngwa ngwa dị mkpa na nnukwu ọsọ ọsọ
Obi dị m ụtọ na a ghabatala ọtụtụ ihe omume nchịkọta data. Ha choro obere ma ọ bụ enweghị nchebe ma nye data nke ọma na nke ọma. ParseHub bụ ihe omume dị otú ahụ nke na-adịghị mkpa maka nchekwa ogologo oge ma kwere nkwa dị ukwuu. Ọrụ ntanetị weebụ nwere ike iwepụta oge dị mkpirikpi iji wepu data gị ma dị mma karịa usoro nchịkọta data.
Nchịkọta weebụ na-eme ka njirimara ziri ezi na nke ziri ezi, ọ dịkwa mma karịa usoro nchịkọta akwụkwọ.Ufodu ngwa ngwa ntanetinye ihe ntanetan bu ngwa ngwa. Ha na-enye data bara uru n'ime sekọnd abụọ ma ghara ịhapụ mmejọ n'ime ederede gị. Ezi nbudata nke data bu ihe ndi choro nke ulo oru. Ọ bụrụ na ị na-emeso ọnụ ahịa ahịa ma ọ bụ nọmba ala na ụlọ, ị kwesịrị ịhọrọ usoro nlekọta weebụ ma ọ bụ ngwanrọ n'ụzọ amamihe dị na ya.
5. Mfe nyochaa
Maka onye ọ bụla na-enweghị ọkachamara ma nwee ahụmahụ, ngwaọrụ (scruting) s dị mfe na-aghọta ma nwee ike itinye ya n'ọrụ. Ọ dịghị mkpa ka ị mụta asụsụ ụfọdụ dịka C ++ ma ọ bụ HTML iji nweta uru site na ngwanrọ scraping. Ọzọkwa, a chọpụtaghị data na-ezighị ezi, yana mmezigharị mkparịta ụka ntakịrị na-edozi ngwa ngwa, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịtụle ibe weebụ maka mma.
6. Chekwa oge gi
Ọ bụrụ na ị bụ mmalite, ị ghaghị inwe ọtụtụ ihe ị ga-eme. Ị ga-ejide n'aka na ịzụ ahịa na nkwalite azụmahịa gị ma ghara ịhapụ oge iji nweta nchịkọta data. N'iji ụdị ngwá ọrụ na-ekpo ọkụ, ị nwere ike ịchekwa oge gị na ike gị. Dịka ọmụmaatụ, Connotate bụ usoro ihe ntanetị weebụ zuru ezu ma dị ebube nke na-adịghị mkpa ọ bụla ntinye ma nwee ike iwepụ ọtụtụ ibe weebụ maka gị n'ime nanị nkeji iri abụọ. Nke a bụ n'ezie nzọpụta oge. Na ụdị ngwá ọrụ ziri ezi, ị nwere ike wepucha weebụsaịtị. A na-enweta data na nhazi usoro naanị.